प्रधानमन्त्रीप्रति नारायण वाग्लेको आक्रोशः मन्दिर धाउँदैछन्, संविधान पढेका छन् कि छैनन् ? – Nepal Press
प्रधानमन्त्रीप्रति नारायण वाग्लेको आक्रोशः मन्दिर धाउँदैछन्, संविधान पढेका छन् कि छैनन् ?
२०७७ माघ १३ गते ११:१८
लेखक पत्रकार नारायण वाग्ले पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कटुआलोचकका रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनविरुद्धकोआन्दोलन निकै सक्रियता देखाइरहेका वाग्लेले हिजोको बालुवाटार घेराउ कार्यक्रममा आक्रामक भाषण गरेका थिए ।
एउटा पिपलको रुखमुनि उभिएर वाग्लेले गरेको भाषणको एउटा अंश अहिले भाइरल भइरहेको छ सामाजिक सञ्जालमा । निधारमा माटोको कालो टिका लगाएका, पछाडि झोला भिरेका, आधा ज्याकेटलगाएका वाग्ले हेर्दै क्रान्तिकारी देखिएका थिए । भाषणमा उनी प्रधानमन्त्री ओलीमाथि खनिए । कसैले कागजको एउटा चिर्कटो दिएपछि उनले धर्मको विषयमा बोलेको भिडियोमा देखिन्छ ।
ओलीले संविधानविपरीत मन्दिर बनाउने कुरा गरेको र पूजा-आरती गर्दै हिँडेको उनले आरोप लगाएका छन् । ओलीको नाम नलिइकन वाग्लेले भने, ‘जो बालुवाटारमा बसेका छन् उनी पहिले देशभरि मन्दिर बनाउँछु भन्दै हिँडे, अब पूजा-आरती गर्दै हिँडिरहेका छन् उनले संविधान पढेका छन् कि छैनन् ? जुन संविधानमा लेखिएको छ धर्मनिरपेक्षता ।’
वाग्लेले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक प्रतिनिधत्व खल्बल्याउन खोजेको आरोप लगाए । सहिदहरुलाई सम्झिने माग महिनामा प्रधानमन्त्री मन्दिर-मन्दिर हिँडिरहेको उनको टिप्पणी छ ।
यसैबीच, वाग्लेले भनेको कुरालाई फरक किसिमले प्रस्तुत गरेर एउटा स्क्रिनसट ट्वीटरमा भाइरल भएको छ । कृष्ण भट्टराई (सुनसरी) ले वाग्लेलाई मेन्सन गर्दै उक्त भिडियो ट्वीटरमा राखेका छन् । आफूले नभनेको कुरा प्रचारित गरिएको भन्दै वाग्लेले चित्त दुखाएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘ मैले भन्दै नभनेको कुरा राखेर यसरी दुष्प्रचार गर्ने को हो ? किन ? नागरिक आन्दोलनलाई विकर्षित गर्न सुरू भएको यो चालबाट सावधान रहनु होला है ! (हेर्नुस् भिडियो)
दाजुले त्यो भिडियोको लास्टमा अरु कसैले दिएको कागजको टुक्रो हातमा परेसी धर्मको बारेमा बोल्नु किन पर्यो होला ? @narayanwagle pic.twitter.com/JiDSicbud5
— Krishana Bhattarai (सुनसरी ) 🇳🇵🇳🇵🙏🙏 (@sunsaribaraha) January 26, 2021
प्रकाशित: २०७७ माघ १३ गते ११:१८
One thought on “प्रधानमन्त्रीप्रति नारायण वाग्लेको आक्रोशः मन्दिर धाउँदैछन्, संविधान पढेका छन् कि छैनन् ?”
कुन्ठा ले भरिएको काइते न्युज्🤮🤧